Usoro na ọnọdụ - Hanukeii
KEDU IHE Ọ BỤ HANUKEII?
Ọnọdụ ndị a zuru oke na-achịkwa mmekọrịta dị n'etiti Indicom Europa 2015 sl (Companylọ ọrụ nwere akara ụghalaahịa Hanukeii) nwere ụlọ ọrụ edebanyere aha na Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid yana CIF ESB87341327 na ndị ọzọ (nke "Ndị ọrụ") na-edebanye aha dị ka ndị ọrụ na / ma ọ bụ zụta ngwaahịa site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. ukara na ebe nrụọrụ weebụ nke Hanukeii (http://www.hanukeii.com"," Ebe a na - echekwa ").
2.1 Onye ọrụ ahụ kwenyere, n'ozuzu ya, iji Storelọ ahịa ahụ, iji zụta ngwaahịa ndị a yana iji ọrụ Storelọ ahịa ọ bụla na-arụsi ọrụ ike, dabere na iwu, omume, usoro ọha na usoro nke ndị a Ọnọdụ Izugbe, ma ị ga-akwụsị iji ha n'ụzọ ọ bụla nwere ike igbochi, mebie ma ọ bụ mebie ọrụ na obi ụtọ nke Storelọ Ahịa ahụ nke ndị ọrụ ma ọ bụ nke nwere ike imerụ ma ọ bụ mebie emebi ngwaahịa na ikike nke Hanukeii, ndị na-eweta ya, Ndị ọrụ ma ọ bụ n’ozuzu nke ndị ọzọ ọ bụla.
3.1 Hanukeii nwere ikike ikpebi, n'oge ọ bụla, ngwaahịa ndị enyere ndị ọrụ n'aka thelọ ahịa ahụ. Karịsịa, ị nwere ike tinye ngwaahịa ọ bụla na ndị enyere ma ọ bụ tinye na thelọ ahịa ahụ n'oge ọ bụla, enwere ike ịghọta ya na belụsọ na enyere ya, Ngwaahịa ndị a ga-achịkwa ngwaahịa ọhụrụ ndị a. N'otu aka ahụ, ọ nwere ikike ịkwụsị ịnye ma ọ bụ kwado ụzọ na ojiji n'oge ọ bụla na enweghị ọkwa ọkwa nke klaasị dị iche iche nke Ngwaahịa enyere na Storelọ ahịa ahụ.
4.1 N'ime oge kachasị nke awa iri abụọ na anọ (24), Hanukeii ga-ezigara Onye ọrụ email email, na-akwado ịzụrụ ihe. Email a ga-ekenye koodu nzụta azụmaahịa, ọ ga-akọwakwa njirimara nke ngwaahịa a, ọnụahịa ya, ọnụ ahịa mbupu ya na nkọwapụta nke nhọrọ dị iche iche iji kwụọ ụgwọ ngwa ahịa ahụ. Hanukeii.
4.4 Nkwenye iwu ahụ zitere Hanukeii Ọ bụghị dị ka akwụkwọ ọnụahịa, naanị dị ka ihe akaebe nke ịzụta. A ga-eziga akwụkwọ ọnụahịa kwekọrọ na ya na ngwaahịa a.
5.1 Onye ọrụ nwere ikike iwepụ nke ọ ga-esi nweta ya Hanukeii site na email na adreesị na-esonụ: kọntaktị @ hanukeii.com ma kwusi na nzụta n'ime oge anaghị agafe ụbọchị asaa (7) azụmaahịa, gụọ site na nnata nke ngwaahịa a. A ga-eziga ngwaahịa ahụ na mpempe akwụkwọ nloghachi zuru oke yana otu akwụkwọ ndetu ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa, emechara nke ọma, ọnụahịa nke iweghachi ngwaahịa a n'aka Onye na-azụ ahịa. Kwuru nloghachi ga-eme dị ka ntuziaka na Hanukeii Gwa onye ọrụ ya na nzaghachi na ngosi banyere ngosiputa mmeghachi omume a. Onye ọrụ ahụ ga-enyeghachi ngwaahịa ahụ n'ime oge kachasị asaa (7) site na Hanukeii gosi ụdị nloghachi.
5.2 Nwepu ego gụnyere nkwụghachi nke ego a kwụrụ. Iji mee nke a, onye ahịa ga-egosi na nloghachi mpempe akwụkwọ nọmba na njide ihe nke kaadị akwụmụgwọ nke Hanukeii Ga-akwụ ụgwọ ahụ. Agaghị ekwupụta oge ịkwụ ụgwọ kwuru Iwu ahụ.
6.1 Maka ihe ọ bụla mere, ịrịọ ma ọ bụ mmega nke ikike ha, Onye ọrụ nwere ike izipu email na adreesị kọntaktị @ Hanukeii.com.
7.2 Ntinye aka nke Hanukeii A na-eme ya na mmekorita ya na ndi oru ihe omimi di iche iche nke ugwu a ma ama. Agaghị enye iwu maka PO igbe ma ọ bụ na họtel ma ọ bụ adreesị ndị ọzọ na-anaghị adịgide.
8.1 Onye ọrụ ahụ kwenyere na ihe niile dị na Storelọ ahịa ahụ na nke ọ bụla n'ime Ngwaahịa ahụ, ozi na akụrụngwa dị n'ime ya, ụdị, usoro, nhọrọ, ndokwa na ngosipụta nke ọdịnaya ha, yana mmemme kọmputa eji mmekọrịta ha na ha, na-echebe ikike arịa amamihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Hanukeii ma ọ bụ nke ndị ọzọ, yana na Ọnọdụ izugbe anaghị ekwupụta ya site na ikike ụlọ ọrụ na ikike ọgụgụ isi kwuru ikike ndị ọzọ karịa nke echebara n'otu ahụ.
8.2 Ọ gwụla ma ikike site na Hanukeii ma ọ bụ dị ka ikpe ahụ nwere ike ịbụ nke ndị ọzọ nwere ikike dakọtara, ma ọ bụ belụsọ na iwu akwadoro, Onye ọrụ ahụ enweghị ike iwepụtagharị, gbanwee, gbanwee, ghasasịa, tụgharịa, kụọ ụlọ, gbazinye, nye ma ọ bụ kwe ka nnweta ọhaneze site n’ụdị nkwukọrịta ọhaneze nke ihe ọ bụla e zoro aka na ya na paragraf bu ụzọ. Onye ọrụ ahụ ga-eji akụrụngwa, ihe na ozi ọ na-enweta site na iji Storelọ Ahịa naanị maka mkpa nke ya, na-amanye onwe ya ka ọ ghara ime ya, ozugbo ma ọ bụ na ọ bụghị n'ụzọ ọzọ, nrigbu azụmaahịa nke ihe, ihe na ozi enwetara otu.
8.3 Onye ọrụ ahụ ga-ezere izere ma ọ bụ megharịa ngwaọrụ ọ bụla nke teknụzụ guzobere Hanukeii ma ọ bụ site na ndị ọzọ na Storelọ Ahịa.
9.1 N'ikwekọ na Iwu 15/99 LOPD, anyị na-agwa gị na data nkeonwe gị na ozi ndị ọzọ enyere site na mpempe ndebanye, yana nke sitere na azụmaahịa a rụrụ, ga-etinye ma debe ya na faịlụ maka nhazi, nke Hanukeii, ọ bụrụhaala na achọrọ ya kagbuo. A ga-eme ka ọgwụgwọ ahụ bụrụ mmepe na azụmaahịa nke ire ya, nlebara anya nke ngwaahịa na ọrụ ọ na-enweta yana mmelite nke kwuru, yana ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ya na nke ụlọ ọrụ nke atọ metụtara. Hanukeii.
N'otu aka ahụ, a gwara gị na a ga-eme ka data gị nye ụlọ ọrụ ndị metụtara maka ebumnuche ndị egosiri. Hanukeii Ọ ga - eji data zoro ezo ndị a niile, bụrụ naanị onye na - anabata ha, ma ghara itinye ọrụ ma ọ bụ nkwukọrịta n'etiti ndị ọzọ na - abụghị usoro iwu ugbu a.
Onye ọrụ na-ekwupụta ngwa ngwa maka mbugharị ya, ọbụlagodi site na iji kọmputa, Hanukeii na ụlọ ọrụ ndị ahụ e kwuru na mbụ, nkwukọrịta azụmahịa na onyinye na nkwado na asọmpi. Ee, a nabatara m.
9.2 Onye ọrụ ahụ nwere ike igosi ikike ịnweta, ndozi, mmegide ma ọ bụ kagbuo ya n'oge ọ bụla site na ịkpọtụrụ ya Hanukeii, site na email adreesị ịkpọtụrụ @ Hanukeii.na., na-etinye otu NIF gị ma ọ bụ akwụkwọ njirimara dochie anya gị.
10.1 Hanukeii Ọ ga-eme ka iji paswọọdụ onwe onye mee ihe maka onye ọrụ na-edebanye aha dị ka weebụsaịtị. A ga-eji okwuntughe a nweta ọrụ enyere site na Weebụsaịtị. Onye ọrụ ahụ ga-edebe okwuntughe n'okpuru ọrụ naanị ya na ọrụ nzuzo ọfụma na oke kachasị, na-ewere ya, otu ọghọm ma ọ bụ nsonaazụ ụdị ọ bụla sitere na mmebi ma ọ bụ ikpughe nzuzo ahụ. Maka ebumnuche nchekwa, enwere ike gbanwee paswọọdụ maka ịbanye na ọrụ metụtara weebụsaịtị yana oge ọ bụla site na onye ọrụ. Onye ọrụ ahụ kwenyere na ị ga-agwa gị Hanukeii ozugbo iji ikike paswọọdụ gị n'enweghị ikike, yana nnweta site n'aka ndị ọzọ na-akwadoghị ya.
11.1 Hanukeii na-eji kuki iji meziwanye ọrụ ya, kwalite ịnyagharị, na-echekwa nchedo, nyochaa njirimara Onye ọrụ, kwado ohere ịnweta nkeonwe ma soro ojiji nke Storelọ Ahịa. Kuki bụ faịlụ arụnyere na draịvụ kọmputa ya ma ọ bụ na ebe nchekwa ahụ na nchekwa ahụ sistemụ arụmọrụ kọmputa nke Onye ọrụ gosipụtara.
Ihe bụ Hanukeii
Ugogbe anwụ maka anwụ
Ugogbe anwụ maka anwụ maka nwoke
Kailani ugogbe anya anwụ
Ugogbe anwụ anwụ anwụ anwụ
Nunkui Ugogbe anwụ
Ugo anwụ maka anwụ Wildkala
© 2021 Hanukeii. Erved Ikike niile echekwabara